Teach – Shwemyanmar
ခဏခဏဘိုင်ပြတ်တတ်တာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေကြားမှာ ပြဿနာတက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ မကြာခဏ ပိုက်ဆံပြတ်တတ်ခြင်းပါပဲ။ ဘယ်လောက်လစာကောင်းတဲ့ အလုပ်ပဲရှိနေပါစေ။ မုန့်ဖိုးကောင်းကောင်း ပေးမယ့် ဆွေမျိုးမိဘတွေ ဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေ။ ဘိုင်ကတော့ အမြဲလိုလိုပြတ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ မမျှအောင် ဈေးဝယ်မိတတ်ကြလို့ပါပဲ။ ဈေးဝယ်စင်တာတွေထဲမှာ လျှောက်သွားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အွန်လိုင်းမှာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ရင်းဖြစ်ဖြစ် လိုချင်စိတ်ပေါ်လာတိုင်း သွားဝယ်နေမိတော့ ဘိုင်ပြတ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ပိုက်ဆံခဏခဏ ပြတ်နေတတ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ၁။ ရက် (၃၀) စာရင်းလုပ်ပါ ဒါကတော့ စိတ်နိုင်ဖို့အတွက် အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးခြင်းတစ်မျိုးပါ။ ရက် (၃၀) မပြည့်မချင်း ဘာပစ္စည်းမှမဝယ်ဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်ထားရတဲ့ ကစားနည်းတစ်မျိုးလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကို လိုချင်စိတ် အရမ်းပြင်းပြလာပြီ ဆိုရင်လည်း စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ချမှတ်ထားပြီး သတ်မှတ်ရက်ပြည့်မှသာ […]
Posted inTeach, သုတရသLeaveaComment on ​ခဏခဏဘိုင်ပြတ်တတ်တာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ
AI အလှပြင် ဆယ်လ်ဖီကင်မရာစနစ်ပါ Oppo F5 Youth ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲ ရောက်လာ
၃၁၉၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။ ဖုန်းကို သုံးစွဲသူရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ဖွင့်နိုင်တဲ့ Face Unlock နည်းပညာသုံးထားတဲ့ Oppo F5 Youth ကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ အနက်နဲ့ ရွှေ နှစ်ရောင်နဲ့ ဝယ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် ၆ လက်မအရွယ် Full View display ပါရှိပြီး ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းအချိုးအစားကတော့ နာမည်ကြီး 18:9 aspect raio ကို သုံးထားတာပါ။ dual nano-SIM သုံးနိုင်တဲ့ Oppo F5 Youth ဟာ RAM 3GB / storage 32GB ပါရှိပြီး processor အနေနဲ့ octa-core MediaTek MT6763 chipset ကို သုံးထားတာ […]
Posted inTeachLeaveaComment on AI အလှပြင် ဆယ်လ်ဖီကင်မရာစနစ်ပါ Oppo F5 Youth ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲ ရောက်လာ
၉ ရက်ထဲနဲ့ ဗိုက် သိသိ သာသာ ချပ်စေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ထိရောက်စေမယ့်နည်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့် အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ ၉ရက်ထဲနဲ့ ဗိုက် သိသိ သာသာ ချပ်စေမရ့် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးထိရောက်စေမရ့်နည်းလမ်းလေး လာပါပြီ။ ကိုယ့်ကတကယ်ဗိုက်ချပ်ချင်တဲ့သူလား ? ဗိုက်အဆီကိုတကရ်ကျချင်တဲ့သူလား ? သူများဗိုက်ချပ်တာလှတာမြင်လို့ဒီအတိုင်းဗိုက်ချပ် ချင်တရ်ပြောမိတာလား ? ဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဲသဲကွဲကွဲ အရင်ဦးဆုံးသိအောင်လုပ်ပါ ! ဘာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေချာအောင်မေးခိုင်းတာလဲဆိုတော့ လူတော်တော်များများက ဗိုက်အဆီကျချင်တရ် ဗိုက်ချပ်ချင်တရ် ဆိုတာကို အင်္ကျီဝတ်ချိန်တွေ ပွဲသွားခါနီးအချိန်မှာ ဒါမှမဟုတ် Facebook ကနေ Body မိုက်မိုက်လေးတွေ အကိတ်လေးတွေ တွေ့လိုက်လို့ တတွတ်တွတ် ပြောမိမရ် ဦးနှောက်ကခဏလေးတွေးလိုက်မိပေမရ့် တကရ်နည်းလမ်းလည်းသိပြီ တကရ်လုပ်တော့မရ် စတော့မရ် ဆိုရင် စိတ်ကဇွဲရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်တဲ့သူနည်းလို့ပါ။ ကိုယ့်ကတကရ်ဗိုက်ချပ်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်အခုစာကနေစပြီး အစ အဆုံးအထိသေချာ နားလည်အောင်ဖတ်ပါ ဓာတ်ပုံနဲ့စာနဲ့တကွ ဗီဒီယိုနဲ့စာနဲ့တကွသေချာလေးရေးသားပေးထားပါတရ်။ အပိုင်း ၃ ပိုင်းလေးခွဲ ထားပါတရ်။ ပထမအပိုင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ […]
Posted inTeach, သတင်းLeaveaComment on ၉ ရက်ထဲနဲ့ ဗိုက် သိသိ သာသာ ချပ်စေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ထိရောက်စေမယ့်နည်း
ကိုယ့် ဖုန်း က နှေးကွေးနေတယ်ဆိုရင် Uninstall လုပ်သင့်တဲ့Application ၇ ခု Android ဖုန်း တစ်ခု ဝယ်ယူထားတယ်ဆိုရင် ဖုန်း က ဝယ်လာတုန်းက သုံးရတာမြန်ဆန်ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ နှေးကွေး လာတာကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Application တွေကို ဖုန်း က မနိုင်တဲ့ လေးပင် တဲ့ Application တွေပဲ Install ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောပြသွားမယ့် Application တွေက ဖုန်း ကို အဓိကလေးလံစေတဲ့ Application တွေဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ်လို့ သွင်းထားမိရင် Uninstall လုပ်ထားတာ အကြောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ 1. Snapchat Snapchat Application က သုံးရတာပျော်ဖို့ကောင်းပေမယ့် ဖုန်း ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို […]
Posted inTeach, သုတရသLeaveaComment on သူငယ်ချင်းရဲ့ဖုန်းက နှေးကွေးနေတယ်ဆိုရင် Uninstall လုပ်သင့်တဲ့ Application ၇ ခု